yakanakisisa mutsetse & mutopota
Chii kushanda nheyo vakasiyana yemagetsi diaphragm pombi?
The vakasiyana yemagetsi diaphragm Pombi dzinofambiswa pedyo micro DC injini (kazhinji 5V, 12V, 24V injini), iyo inobudisa zvemukati zvemaziso eccentric mudziyo kuita eccentric inofamba, uye eccentric inofamba inobudisa womukati diaphragm kuti danana. Naizvozvo, mhepo iri pombi mukamuri yakatarwa inzwi compressed (the kubvisa chengarava riri kuvharwa kana compressor kuzarurwa, uye pedza chengarava kuzarurwa kuumba zvakanaka kumanikidzwa zvishoma), uye kuwedzera (the chiutsi chengarava riri kuvharwa apo compressor ndiye yakavharwa, uye kubvisa chengarava kuzarurwa kuumba kunaka kumanikidzwa), uye kupomba rinoitwa. A kumanikidzwa musiyano iri vanowanika pakati mhepo chiteshi uye kunze mumhepo kumanikidzwa. Pasi chiito kwokudzvinyirira musiyano, gasi iri pressurized (vakanwa) muimba pombi yepamusoro uye vasunungurwa chiutsi pachiteshi.
Musiyano uri pakati kudzokera pombi uye kumanikidzwa chinja pombi?
Reflux mhando: The pombi ine yayo kumanikidzwa rokuyamura dzakayerera redunhu mudziyo. Kana mvura nzira yokubudisa iri akavanzwa nokunamirwa nechisimbiso, nemvura mumvura pombi anotanga vapiwa decompress uye kudzoka, kwokudzvinyirira mukati mvura nenyere havazowandi, uye mvura nenyere haingasviki kuparuka.
Pressure chinja mhando: Pashure kutendeukira pamusoro yemagetsi chinja, batidza mvura pfuti chinja, kutanga kushanda, kudzima mvura pfuti chinja, mvura pombi rwoga akagura uye kumisa kushanda; zvino dzokai pamusoro mvura pfuti chinja, mvura pombi rwoga anotanga kushanda. Kwokudzvinyirira kwomunhu pombi rwoga vanogadzirisa kuita maererano kukura kamwene.
Kazhinji, pane mhando dzakawanda sprayers, uye kumanikidza haizoshandisi kazhinji kushandiswa pamusoro motokari Washing machine. Tarisa ako ezvinhu uye sarudza zvakanaka pombi.
Chii kutsanangurwa kushandiswa DC pombi?
1, The kugadzirwa dzemagetsi sprayers kushandiswa mune zvokurima.
2, Kuti kugadzirisa kushandiswa RV, Yachts, etc. pakushandisa zvokudya, kugeza, kugeza, chimbudzi, kugeza nemvura.
3, Vehicles, ivhu uye nezvimwewo kuchenesa
4, Food, chinwiwa kubudiswa uye kugadzira michina.
5, The mhuri mvura.
6, The kwezuva indasitiri.
7, mvura yokunatsa indasitiri.
8, Other midziyo uye hurongwa yaida mura kuchinjwa, jekiseni uye kunyange metering
Ndezvipi vanhuwo kutadza uye troubleshooting nzira nokuda knapsack yemagetsi sprayers?
Kushomeka pfapfaidzo kumanikidzwa, murombo atomization: Kana mvura bhora vharuvhu ukazvikudza nokuda tsvina, asi Inlet vharuvhu anogona kubviswa uye tsvina inogona kubviswa pamwe nejira; kana mukombe wakaremara, mukombe itsva inogona kutsiviwa; kana joinhi haana akagadzawo rakavhara mhete, kana usabuda nokuda kuvadza chisimbiso mhete, anogona kuiswa kana kutsiviwa.
Spraying haadi kuumba bvungapfunga: Kana buri vachida pamusoro kamwene muviri nemutemo tsvina, gomba vachida inogona dredged; kana rokuchenesa kamwene rejeri zvinogona disassembled nokuda kamwene mugomba blockage, yakaoma chinhu orifice sezvo waya kana tsono mhangura hazvigoni kushandiswa kudzivisa gomba kuwedzera kwakadaro. Kuti pfapfaidzo mhando kuipa; kana Sefa ari casing iri tsinga kana bhora iri yakaturikwa nemvura yepasi, asi Sefa zvinofanira kucheneswa uye tsvina pamusoro bhora anofanira kucheneswa.
The chinja idonhe kana hachivaiti: Kana chinja chivharo hauna akasungirirwa, sungisa kuti chinja chivharo; kana pesin pamusoro chinja chinoumba inochera, kutsiva pesin; kuti chinja hachivaiti, nokuti anoiswa kwenguva refu, kana kushandiswa kwenguva refu, kuti chinja Musimboti iri vakanamatira kubudikidza etch ari mumiriri, uye nhengo dzinofanira kubviswa rokuchenesa mu eparafini kana mafuta Diesel; kana zvakaoma kubvisa, anogona Kunyudzwa eparafini kwenguva yakati, uye ipapo akabvisa uye kubviswa, uye nesimba zvinhu hazvigoni kushandiswa.
Water leakage nechimwe vagari: Kana vadyi iri vakasununguka, sungisa kuti nati; kana gasket hauna flattened kana kukuvaradzwa, kuti gasket inofanira flattened kana gasket kutsiviwa; kana gasket mukukutu nokuda shrinkage, rinogona akanyevenutsa mafuta mhuka pamberi kushandiswa.
How kuongorora rokutsvaira zvinokonzerwa wechipfuwo mukuru kumanikidzwa Cleaner?
Pashure kushandisa refu-kumanikidzwa yakachena nokuti mukuru-kumanikidzwa mvura ndege rokutsvaira, pakupedzisira tinoda kuziva kuti rokuchenesa kwepasi inoshanda. Izvi zvinoda rokuongorora, Saka, sei kuona rokutsvaira mugumisiro mukuru kumanikidzwa Cleaner pashure rokuchenesa? Kune nzira dzakawanda, izvo:
(1) Random zvakabudiswa nzira
mhando iyi vasabatwa nzira yakakodzera okuchenesa anoramba zvakawanda yainetsa. Nokuda kwenguva, tinogona kuedza kwete rokutsvaira anoramba mumwe nomumwe. Panguva ino, tinofanira kazhinji tinofanira randomly kusvina nomumwe yokuchenesa zvinhu kunovhenekwa. Mugumisiro ndiko kuziva kuchena vose pakuchenesa zvinhu. Kudikanwa teererai kushandisa nzira iyi kuti usarudze imwe nhamba miedzo kuti zvakarurama kuratidza zvinonyatsorehwa mamiriro ezvinhu.
(2) Kuyera pamwe zvikuru yakasvibiswa zvikamu sezvo rokuongorora mureza
Patinoshandisa nzira iyi yokuedzwa, kana kupfuura yakasviba zvikamu kwasvika zvaida nenhanho utsanana, ipapo rokuchenesa mugumisiro dzimwe nezvishoma chakakomba kusvibiswa anogona kazhinji zvinodiwa rucheno.
(3) Special rokuongorora nezvevamwe tsvina
nzira iyi vasabatwa ndiko kusarudza zvikuru tsvina yokuyeresa. The vakawanda zvemaziso zvikamu zviri degreased uye ndaichenesa. Nzira iyi rakakodzera. Panguva ino, nyaya yacho bvunzo riri jikichira tsvina pasina dzakananga kuonekwa nevamwe tsvina. Izvi bvunzo nzira zvinogonawo tarisa kuchena chinhu kucheneswa.
Kuburikidza pakusuma kumusoro, tinogona kuona kuti pane nzira dzakawanda kuona rokutsvaira mugumisiro mukuru kumanikidzwa cleaner. Unogona kusarudza vasabatwa nzira nesayenzi maererano chaicho ezvinhu.
Car Washing Machine , High-Pressure Pump , Portable Car Washing Machine , Four Point Pump ,